Global Voices teny Malagasy · 12 Jolay 2014
Tantara tamin'ny 12 Jolay 2014
Eoropa Andrefana12 Jolay 2014
[...] Efa an-taonany vitsivitsy izao no misy fanavaozan-drafitra ara-teknika eo amin'ny tsenam-barotra noho ny finiavana misongan'ireo mpandraharaha hanamafy ny fisiany na eo amin'ny tsenam-barotry ny antso an-tariby, na ny finday. Noho izany fomba fijery izany indrindra no hitambaran'ny SFR sy ny Numericable, mba hamaliana ireo hetahetan'ny mpanjifa eo amin'ny lafiny...
Raha Shinoa Mpanakanto Te-hanao Fampisehoana Any Ivelany Ianao, Ho Ambony Ambany Ny Fiainanao
Azia Atsinanana12 Jolay 2014
Ataon'i Shina lasibatra ny fampisehoana karakarain'ireo vondrona mpanakanto avy ao aminy mandeha any amin'ny firenena ivelany. Ataony amin'ny anaran'ny politikam-pitsitsiana.
Arzantiniana Mpilalao Baolina Ezequiel Lavezzi Mahazo Mpanjohy Vehivavy
Arzantina12 Jolay 2014
Miteraka firehetam-po, fihaonana, fanantenana, finamanana ary fivoriana eo amin'ny namana sy ny fianakaviana ny Mondialy. Na dia izany aza, hoan'ireo olona tsy dia zatra amin'ny endrika teknikan'ny fanatanjahantena, miteraka fihetseham-po ihany koa ny Mondialy.